पत्याउलान् त दर्शकले नम्रताको एक्शन ? - Super Hit News
पत्याउलान् त दर्शकले नम्रताको एक्शन ?
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ आफूले निर्माण गरेको दोश्रो फिल्म ‘जाइरा’ को पब्लिसिटीमा अहिले लागिपरेकी छिन् । आफ्नो लगानी लागेको फिल्मले धेरै भन्दा धेरै कमाइ गरोस् भन्ने चाहना सबै निर्माताको हुन्छ । त्यसकारण नम्रता ‘जाइरा’ का लागि बिशेष रुपमा खटिट्इरहेकी छिन् । यसअघि उनले ‘सोल सिस्टर’ फिल्म निर्माण गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनले त्यो फिल्मको खासै पब्लिसिटी गरिनन् । अझ् उनले आफ्नो फिल्म ‘एलिट’ दर्शकलाई मात्र भएको भन्दै सिंगल थिएटरमा रिलिज गर्ने चाहनै राखिनन् ।
पब्लिसिटी पनि इङ्लीस मिडियमका मिडियामा मात्र गरिन् । नेपाली भाषाका संचारमाध्यमलाई उनले ‘इन्भाइट’ त गरिनन् नै, वास्ता समेत राखिनन् । अन्ततः ‘सोल सिस्टर’ हलमा लागे–उत्रेको उनी आफैलाई पत्ता भएन । नम्रताको सो फिल्म हेरेका कतिपय फिल्मकर्मीले फेसुबकमा स्टाटस लेख्दै गालीको बर्षा नै गरेका थिए ।
‘सोल सिस्टर’ मा नम्रता दोहोरो भूमिका थिइन् । तर,दर्शकले कत्ति पनि रुचाएनन् । त्यो फिल्मको अपार असफलतापछि नम्रतालाई महसुुस भएछ क्यारे, फिल्म भनेको आम दर्शकका लागि हुनुपर्छ । अहिले उनले आम दर्शकलाई हेक्का राखी ‘जाइरा’ निर्माण गरेको बताउने गरेकी छिन् । यो फिल्ममा उनी मार्शल आर्टस् प्लेयरको भूमिकामा छिन् । सो भूमिकाका लागि उनले केश मुन्डन समेत गरेकी थिइन् ।
अहिले मोफसलमा पनि प्रेसमिट गरिरहेकी नम्रता यो फिल्मबाट निकै आशावादी छिन् । तर, उनलाई एक्शन रोलमा दर्शकले कत्तिको मन पराउने हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । अबको शुक्रबार अर्थात् ६ भदौमा प्रदर्शन हुने ‘जाइरा’ को प्रचारप्रशार प्रयाप्त भने हुन सकेको देखिदैन ।
Tags: Namrata Shrestha, New Nepali Movie Xira
Previous बेलायतमा धमाधम खिचिदै ‘कैदीको पत्र’
Next हिरोहरुले मज्जैले मनाए युरोपमा ‘भ्याकेशन’,थ्याङ्क्यु ‘एलसी–२’ !